Ahoana no Hataoko Raha Misy Mifosa Aho? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Nahoana ilay izy no mankarary fo?
Ny mampalahelo: Tsy azo sakanana ilay izy
Ny mahafaly: Tsy voatery hisy vokany be eo amin’ny fiainanao ilay izy
Henonao fa nisy namanao nanely resaka momba anao. Vitanao ve raha tonga dia tsy raharahaina fotsiny ilay izy?
Tena vitako izany
Tsy vitako mihitsy
Henonao fa nisy namanao nanely resaka momba anao. Vitanao ve ny hiresaka moramora amin’ilay namanao momba an’ilay izy?
Henonao fa nisy namanao nanely resaka momba anao. Ianao koa anefa mahalala zavatra ratsy momba azy, sady mbola tsy fantatry ny olona mihitsy ilay izy. Vitanao ve ny tsy hamaly faty ka tsy hifosa azy koa?
Mbola mila miezaka ianao, raha hoe “sarotra amiko” na “tsy vitako mihitsy” no namalianao an’ireo fanontaniana ireo. Tena hanampy anao ity lahatsoratra.
Tena ratsy toetra ny olona sasany, ka manao fanahy iniana manely lainga mba ho ratsy laza ianao. Ny sasany indray tsy tena hoe ratsy fanahy be hoatr’izany, kanefa mampalahelo anao foana ilay izy. Indrindra moa raha hoe olona natokisanao ilay nifosa anao!—Salamo 55:12-14.
“Henoko fa nofosain’ilay namako izay aho hoe izaho, hono, tia tena fa tsy mba miraharaha olona. Narary be ny foko! Tsy azoko mihitsy hoe naninona izy no niteny an’izany.”—Ashley.
Zava-misy tsy azo lavina: Na namanao be na tsia ilay nifosa anao, dia mahasosotra anao foana ny mieritreritra hoe zavatra ratsy no resahin’ny olona momba anao.
Maro ny antony mahatonga ny ankizy ho tia miresaka olona. Anisan’izany ireto:
Mba liana amin’ny fiainan’ny olona. Efa natao hiresaka sy hiaraka amin’ny hafa mihitsy ny olombelona. Tsy diso àry isika raha miresaka momba ny hafa. Ny Baiboly aza mampirisika antsika mba “hihevitra izay hahasoa” ny namantsika.—Filipianina 2:4.
“Ny miresaka momba ny olona no tena mahaliana noho ny miresaka zavatra hafa.”—Bianca.
“Tsy haiko fa hoatran’ny tiako be ny maheno vaovao momba ny olona, dia miresaka an’izany amin’ny hafa. Mahafinaritra an’ahy fotsiny ilay izy.”—Katie.
Tsy misy horesahina. Tantarain’ny Baiboly fa nataon’ny olona sasany ‘fandanian’andro ny firesahana na fihainoana zava-baovao.’ (Asan’ny Apostoly 17:21) Mbola misy manao an’izany koa ankehitriny.
“Rehefa tsisy zavatra mahaliana amin’ny fiainan’ny olona, dia mamorona mihitsy ny sasany amin’izay mba misy horesahina.”—Joanna.
Be fialonana. Mampitandrina antsika ny Baiboly mba tsy hampitaha ny tenantsika amin’ny hafa. (Galatianina 6:4) Misy anefa manao an’izany ka lasa manaratsy an’izay olona atahorany hisongona azy.
“Matetika no be fialonana ny mpifosafosa. Manely tsaho momba an’ilay ankizy tsy azoazony izy, amin’izay mba tsy hoatran’ny hoe voatsindry be, fa mba mahatsiaro hoe tsara noho ilay ankizy.”—Phil.
Zava-misy tsy azo lavina: Na tianao na tsy tianao, dia tsy maintsy miresaka momba ny hafa ny olona, ary hiresaka momba anao koa.
Marina fa tsy azonao tampenana ny vavan’ny mpifosafosa, nefa azonao amboarina ny fonao sy ny sainao ary afaka manao zavatra ianao raha tianao. Ireto àry misy safidy roa azonao eritreretina:
SAFIDY 1: Aza raharahaina fotsiny. Ny tena tsara dia hoe avela any fotsiny ilay izy, indrindra raha zavatra tsy misy dikany. Araho ity torohevitry ny Baiboly ity: “Aoka ianao tsy ho mora tezitra.”—Mpitoriteny 7:9.
“Nandeha be ny tsaho hoe nisy ankizilahy, hono, niaraka tamiko nefa ilay ankizy aza mbola tsy hitako hatramin’izay niainako! Resaka vendrana be ilay izy, dia nihomehezako fotsiny.”—Elise.
“Tsisy atahoranao rehefa tsara laza ianao. Na misy mifosafosa aza manko ianao, dia tsy hino an’izany ny olona. Ho fantatra eny ihany ny marina!”—Allison.
Andramo izao: 1) Soraty hoe inona ilay noresahin’ny olona momba anao, ary 2) soraty izay tsapanao. Rehefa avy nieritreritra mangina ‘tao am-ponao’ ianao, dia mety ho vitanao ny hanadino an’ilay izy.—Salamo 4:4.
SAFIDY 2: Miresaha amin’ilay olona nanely resaka. Mety ho hitanao mantsy hoe tsy zavatra tsotsotra ilay izy, ka mila manatona azy ianao.
“Mety ho tsara ny miresaka amin’ilay olona nanaparitaka tsaho momba anao. Tsapany amin’izay hoe tsy maintsy ho tonga any am-poto-tsofin’ny olona fosainy ihany ny teniny. Hazava ny resaka avy eo, ka azo inoana fa hilamina ilay olana.”—Elise.
Alohan’ny hanatonanao an’ilay nifosa anao, dia diniho ireto andinin-teny sy fanontaniana ireto:
‘Izay mamaly nefa mbola tsy nihaino akory, dia hadalana ho azy izany.’ (Ohabolana 18:13) ‘Sao dia mba misy zavatra tsy fantatro? Ary sao dia diso fandray fotsiny ilay olona nitantara an’ilay izy tamiko?’
‘Aoka ianao ho mailaka hihaino, tsy ho maika hiteny, tsy ho mora tezitra.’ (Jakoba 1:19) ‘Mety ve raha izao aho no miresaka amin’ilay olona? Sao dia mbola entim-po be aho? Sa ve tokony hiandriandry kely aho mba ho afakafaka aloha ny foko?’
‘Izay tianao hataon’ny olona aminao, no mba ataovy aminy koa.’ (Matio 7:12) ‘Raha izaho indray ilay diso, ahoana no tiako hiresahany amiko ary amin’ny toerana manao ahoana? Tokony hanao ahoana ny teniko sy fihetsiko mba tsy hahatonga anay hiady?’
Andramo izao: Aza tonga dia manatona an’ilay olona, fa soraty aloha hoe inona avy no holazainao. Miandrasa herinandro na tapa-bolana, dia vakio ilay izy ary ahitsio raha ilaina. Asehoy an’ny mamanao na dadanao na namanao efa matotra ilay izy avy eo, ka anontanio hoe ahoana no fahitany azy.
Zava-misy tsy azo lavina: Marina fa tsy ho vitanao ny hisakana ny olona tsy hifosa anao, nefa tsy voatery hoe avelanao hisy vokany eo amin’ny fiainanao izany.
“Misy aloha tsaho tena tsisy dikany e. Dia inona moa no ivakiana loha amin’izany? Fa raha lasa manakorontana ny fiainanao kosa ilay izy, ohatra hoe mahatonga anao tena halaza ratsy, dia aleo tenenina ilay olona nanaparitaka azy.”—Brianna.
“Raha fosain’ny ankizy ianao, dia aza mamaly faty hoe hifosafosa azy koa. Lasa mitovy aminy tsinona ianao, nefa ianao aza tsy tia an’ilay ataony.”—Olivia.
Ahoana no Ataoko Raha Misy Mifosafosa?